Qiso: Riya Kastaa Way Rumowdaa!
Asaasaha shirkadda Fedex (Federal Express) Mr. Fred Smith markii uu jaamacadda sanadkii ugu danbeeyay ku jiray ayuu macalinkiisu ka dalbaday inuu soo diyaariyo mashruuc ka mid ah kuwo uu ku riyoonayo. Smith ayaa macalinka markiiba usoo gudbiyay fikradda mashruuca ah “ Shirkadda alaabooyinka dunida u kala qaada oo gaadhsiisa goob kasta laba maamod iyo wax ka yar”.
Laakiin maclinka ayaa mashruucaasi ku tilmamay mid faashil ah oo aan suurtagal ahayn waxaana uu ku siiyay derejada ah “Aqbal keliya”. Laakiin wuxu u sheegay inuu siin doono derejo wanaagsan haddii mashruuc kan ka fiican uu keeno. Smith isla weedhahaasi ayaa ku dhaliyay inuu riyadiisa kaga dhabeeyo.
Markii uu Jaamacadda ka qalin jebiyay wuxu bilaabay mashruuca rarida iyo gaadhsiinta alaabooyinka ,isagoo ku bilaabay waxa yar, laakiin bilwogii khasaare ayu galay iyadoo weliba dadkuna ay ku dheeldheel jireen shaqadii cusub.
Smith wuu iska watay oo dadaalay ilaa ay noqotay shirkadiisu kuwa ugu waaweyn ee hawshaasi dunida ka haya. Maanta dunida gaadiidkiisa dhulka, dayuuradihiis iyo Markaabtiisu ayaa meel kasta iyo dacal kasta oo dunida mushaaxaya iyagoo geynaya Alaabo kala duwan.
Taariikhdu ma xusin macalinkaa ardayga miskiinka ah siiyay qiimaynta liidata iyo niyad jabka laakiin waxay qaad dhigtay taariikhdu adkaysiga iyo niyadda adag ee ardaygaasi iyadoo lagu qoray halkudhigiisa xuruuf bilyano doller xikmadda “ Ilaali riyaadaada oo ku sabir waxay noqon doontaa mid dhab ah”